europetravel မော်ကွန်းတိုက် | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: europetravel
နေအိမ် > europetravel
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ဥရောပ၌ကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းရှိသည်, ထိုသို့အကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်အကြားရေပန်းစားအားလပ်ရက် ဦး တည်ရာအောင်. ပြတိုက်, ပန်းခြံများ, အထင်ကြီးမှတ်တိုင်များ, နှင့်စားသောက်ဆိုင်တစ်စွယ်စုံရွေးချယ်ရေး. တိုတိုပြောရရင်, အကယ်၍ သင်သည်အငြိမ်းစားယူလျှင်မည်သည့်မြို့တွင်မဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟန်ဆောင်ရန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းများစွာရှိသည်…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ...
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ဥရောပသို့ခရီးသွားခြင်းသည်ခမ်းနားထည်ဝါသောနန်းတော်များသို့ပြန်လာခဲ့သည်, သစ်တောများ, နှင့်အလှဆုံးသဘာဝနှင့်ရေတံခွန်များ. သင်အီတလီသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်သို့ခရီးသွားနေကြသည်ဖြစ်စေမ, စီစဉ်သည်2လကြာယူရိုခရီးစဉ်, သို့မဟုတ်ဥရောပနိုင်ငံတစ်ခုအတွက်သာတစ်ပတ်သာရှိသည်,…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ Ciao! သငျသညျအီတလီနိုင်ငံမှတစ်ဦးတစ်သက်တာ၏ခရီးစဉ်စီစဉ်နေ! ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနုပညာက၎င်း၏အကျင့်ကိုကျင့်၏ကတိတော်များကိုသင် elate နှင့်လာအောင်နှိုးဆွဖို့သောခေတ်ဆန်းနှင့်တစ်မြို့ရဲ့မွေးရပ်မြေဖြစ်ပါသည်, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, နှင့်၎င်း၏မေတ္တာအစားအစာနှင့်အတူ. အီတလီသည်အိမ်ဖြစ်သည်…
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ ခရီးသွားနေစဉ်ပုံသဏ္ဌာန်ကျခြင်းသည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်. သွေးဆောင်ဖြည့်စွက်အစားအစာများကိုအမြဲတမ်းကမ်းလှမ်းထားသည်. ၎င်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပုံမှန်အားဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းလှည်းကိုမကြာခဏကျစေနိုင်သည်. ဒီတော့ခရီးသွားနေစဉ်မှာဘယ်လိုနေလဲ? ယင်း…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ကမ္ဘာတစ်လွှား, Tipping အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောသက်ရောက်မှုများနှင့်အလေ့အကျင့်ရှိပါတယ်, ဥပမာ: တောင်အာဖရိကမှာ Tipping လုပ်ဖို့လိုတယ်, က USA တွင်ဖြစ်သကဲ့သို့. သငျသညျအကြားတစ် ဦး အစွန်အဖျားထားခဲ့ဖို့မျှော်လင့်ရသည် 15 နှင့် 25% အမေရိကမှာ, သင်မကျင့်လျှင်သင်အလွန်ဖြစ်နိုင်သည်…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ လက်ရှိ coronavirus ဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူ (Covid-19) ဖရိုဖရဲသို့လူတိုင်းရဲ့ခရီးသွားအစီအစဉ်များကိုပစ်, သငျသညျ coronavirus ကာလအတွင်းသို့မဟုတ်မသင့်ရဲ့အားလပ်ရက်ကိုစောင့်ရမည်ဆိုပါကကသိရန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. While we can’t make that decision for you if you do choose to continue on it’s…
ရထားထဲမှာအားဖြင့်ဥရောပပျေါလှငျ3ရက်သတ္တပတ်
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ တစ်ဦးက quintessential ခရီးသွားခရီးရထားဥရောပခရီးရန်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစာရှောင်ခြင်းတို့သည်ဦးစားပေး Eco-friendly ခရီးသွားနည်းလမ်းဖြစ်လာ. ခရီးသွား, အနှစ်သာရအတွက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းခြုံငုံထင်ဟပ်ရန်အတွက်ဆွေးနွေးပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ခြုံငုံထင်ဟပ်ရန်အတွက်ဆွေးနွေးမသာ. စိန့်စဉ်းစားကြည့်ပါ. သြဂတ်ရဲ့တီထွင်ခဲ့တယ်စကားလုံးများကို, "ဒီကမ္ဘာကြီးဟာစာအုပ်ဖြစ်ပြီးသူတို့အား…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ...